Nzọụkwụ 5 iji nwekwuo okporo ụzọ ma gbanwee ndị na-eduga n'ime ndị ahịa | Martech Zone
Satọdee, Nọvemba 3, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndi otu ndi otu Brain Group weputara ihe omuma, Gini bu ahia ahia? Ihe omuma ihe omuma kacha mma bu ndi na-ewe ihe di mgbagwoju anya ma mee ka o di mfe. Ihe omuma ihe omuma a bu ime nke ahu na isi ahia ahia.
My naanị nnyocha nke a infographic bụ na e nwere ihe a nnukwu nzọụkwụ na-efu n'etiti ede nke ọdịnaya na-achọta… na nke ahụ bụ njikarịcha na nkwalite. Ka ewere chọta gị, i pughi ichere ka ndi mmadu chọta gị, ị kwesịrị ịdị na -achọ ọdịnaya ma na-akwado ọdịnaya ka ọ dị ebe ndi na ege gi nti na-ele anya.
Nke ahụ pụtara ịkesa mgbasa akụkọ mgbasa ozi, ịkesa ọdịnaya a na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịkekọrịta ọdịnaya ahụ na obodo ndị ezubere iche, na-ebute ọdịnaya ahụ ka e wee chọta ya na nsonaazụ ọchụchọ, yana ọbụlagodi na-akwụ ụgwọ maka nkwalite ọdịnaya. Onye ọ bụla na-ede ọdịnaya ụbọchị ndị a ma enwere ọtụtụ ọdịnaya dị ukwuu, nke ahụ, n'eziokwu, achọtaghị n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ emeghị ihe iji kwalite ọdịnaya ahụ.
Tags: ịde blọgụcontent Marketingakakabaredetọghata -eduinbound marketingdịkwuo okporo ụzọndu ndundu nurturing